कांग्रेसले निर्वाचन विथोल्न खोज्यो भने ठूलो भूल हुनेछ —राम कार्की ,नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) – Maitri News
कांग्रेसले निर्वाचन विथोल्न खोज्यो भने ठूलो भूल हुनेछ —राम कार्की ,नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको नेकपा (एमाले) सँगै अर्को बामशक्ति माओवादी केन्द्र र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्वको गरेको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच यही मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल र पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गर्ने ३ दलको सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै स्वागत गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि यसलाई नयाँ युगको थालनी भन्दै स्वागत गरेको छ । दुबै दलका बैठकले ती सहमतिलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि अहिले बाम कार्यकर्ताहरुमा पनि एक प्रकारको उत्साह पैदा भएको छ । लचिलो र जिम्मेवार ढंगले चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रभावकारी कदम चाल्ने यी दलका निर्णयसँगै मुलुकभरीका कार्यकर्ता पनि प्रदेश र संघीय चुनावमा एकिकृत भएर अघि बढ्ने तयारीमा जुटेका छन् । पार्टी एकता संयोजन समिति, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड कार्य दल र घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदलले समेत आफ्नो कार्यसम्पादन थालनी गरेका छन् । त्यो त एमालेले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम नेतृत्वको संयुक्त कार्यदललाई संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र तयारीको काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ भने महासचिव इश्वर पोखरेल नेतृत्वको कार्य दललाई चुनावका लागि तीन दलबीच निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको जिम्मेवारी दिइएको छ । यता माओवादीले पनि तयारीलाई तिव्र बनाएको छ । माओवादीले पनि बाम एकताको खुलेर स्वागत गरेको छ । माओवादीका बौद्धिक नेता राम कार्कीले समेत बाम एकताको स्वागत गर्नुभयो । उहाँसँग बाम एकता, पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, बामतालमेलपछिको चुनावी परिणाम आदिका बारेमा केन्द्रित भएर मैत्रि न्युजडटकमका लागि मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
बाम शक्तिको चुनावी तालमेल र एकताको सन्दर्भलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो स्वाभाविक छ । अहिलेसम्म पनि विभिन्न गुट–उपगुटमा बाम शक्तिहरु विभाजन हुने र बाम आन्दोलन नै कमजोर भएको अवस्था छ । स्वाभाविका रुपमा गतिरोध अन्य गर्नका लागि अनि बामपन्थीहरुले परिकल्पना गरेको समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न गुटमा रहनु भन्दा वैचारिक छलफलमा लैजानु श्रेयकर हुन्छ । हामीले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर द्विसतवार्षिकी मनाउने क्रममा सबै बामशक्तिलाई समाहित गर्ने प्रयास गरेका हौँ र त्यसैको थालनी पनि गरेका थियौँ । केही हप्ता अघि मात्र हामीले विभिन्न पार्टीका साढे तीन सय कार्यकर्तालाई धुलिखेलमा प्रशिक्षण दिएका थियौँ । त्यसको उदेश्य पनि सबै बामशक्तिको धु्रविकरण नै हो । अहिले विभिन्न गुटउपगुटका नाममा खिचडी पकाउने भन्दा सबै एकै ठाउँमा आएर बैचारिक राजनीतिक आधार प्रदान गर्नु नै सबै भन्दा श्रेयकर हुन्छ ।
यो बाम एकता दीर्घकालिन होइन । क्षणिक आवेग र उत्तेजनामा आएको हो भन्ने पनि आरोप छ नि ?
हामीले यसलाई एकता मात्रै भनेर बुभ्यौँ भने त्यो अपुरो र अधुरो हुन्छ । यो संघर्ष र रुपान्तरण पनि हो । समुहमा रहेका गलत प्रवृति सच्याउने यो ठूलो अवसर पनि हो । एकता, संघर्ष र रुपान्तरण हाम्रो सिद्धान्त नै हो । त्यसैले एकता, संघर्ष र रुपान्तर रहिरन्छ । हाम्रो उदेश्य रुपान्तर पनि हो । बामतालमेल चुनाव केन्द्रित हो । चुनाव सकिएपछि भन्न सकिन्न भन्ने समूह पनि छ नि ? चुनाव एउटा क्याटलिष्ट पनि हो । स्थानीय निर्वाचनमा सबै दललाई जनताले तिमीहरुको हैसियत यो हो है भनेर देखाए । यस अर्थमा भन्ने हो भने चुनावले एक प्रकारको हैसियत पनि देखायो । चुनावले साच्चो अर्थमा भन्ने हो भने जनताले ध्रविकरण रहेका छन् भन्ने सन्देश पनि दिए । चुनावले एक दलले अर्को दललाई निल्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने सन्देश दियो । त्यसैले बाम एकता वा तालमेल एक हिसावले बाध्यता पनि बन्यो । अब किसान आन्दोलनबाट आएको मजदुर किसान पार्टी, नेकपा माले, नेकपा मसाललगायतका दलहरुबीच पनि धु्रविकरण आवश्यक छ ।
यो सम्भव छ ?
हामीले राजनीति गरेको हाम्रा लागि होइन, जनताका लागि हो । हामीले राजनीति जनताका लागि गरेको हो भने जनताका बारेमा पनि त सोच्नु पर्यो नि ? हामीले विकास र समृद्धि जनताका लागि नै गर्ने हो । नेपालको एकीकरण भयो । त्यो भावनात्मक एकता भएन हामी अहिले यही भनिरहेका छौँ । जातीय, क्षेत्रिय एकीकरण चाहियो हामी भनिरहेका छौँ । पूँजीवादी पार्टीको भन्दा भिन्न बाटो देखाउनु पर्छ पनि हामी भनिरहेका छौँ ।
अनि हामीले त्यसो भन्ने हो भने ठोस योजना पनि त ल्याउनु पर्यो नि ?
यो सबै पूरा गर्ने हो भने बाम एकता अहिलेको आवश्यकता हो । बाम एकताको चर्चा पछि कांग्रेस कमजोर भयो । त्यसैले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनाव नगर्ने मनस्थितिमा छन् भन्ने पनि चर्चा छ नि ? कांग्रेस कमजोर पार्टी होइन । अहिले कांग्रेसलाई निलमा जाइन्छ कि भन्ने डर छ । कांग्रेस निलमा जाँदैन । फेरि पनि भनौँ कांग्रेसमा ठूलो जनआधार छ । तर, मतपेटिकासम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई कांग्रेसले पुर्याउन सकेको छैन । सिधा अर्थमा भन्ने हो भने कांग्रेसले बाली उठाउन जान्दैन । मधेसमा पनि कांग्रेसले राम्ररी बाली उठाउन सकेन । मधेसको जनआधार फिर्ता लिने अवस्था अहिले पनि कांग्रेसमा छ । त्यति मात्र होइन बाम एकतासँगै कांग्रेसले पनि अहिले लोकतन्त्रवादीसँग एकता खोरिहेको छ । त्यसले पनि उसको आधार कमजोर छैन । तर, आवेगमा आएर कांग्रेसले निर्वाचन नै नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो भने त्यो उसका लागि निकै ठूलो क्षति हुनेछ । मलाई लाग्छ । कांग्रेसले यस्तो बाटो समाउँदैन ।
बाम तालमेलपछि बाम शक्तिको पोजिसनको के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
यसमा लुकाउनु पर्ने वा धकाउनु पर्ने केही छैन । हाम्रो लक्ष्य भनेको दुईतिहाई ल्याउने नै हो । हाम्रो नीति लागु गर्नका लागि पनि हामीलाई दुइतिहाई नै चाहिन्छ । हमी जनताका बीचमा पनि यही एजेण्डा लिएर जाने हो । हामीले मुलुकलाई समाजवादी गणतन्त्रमा लैजानन्छौँ भनेका छौँ । त्यो पूरा गर्न हामीले दुईतिहाई बहुमत अनिवार्य ल्याउनुपर्छ । मलाई विश्वास छ । जनताले हामीलाई त्यो पोजिशन दिनेछन् । हामी यही उदेश्यका साथ प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ । मुलुकभरीका जनताका घरदैलोमा हामी जाने पनि यही एजेण्डा बोकर नै हो । हाम्रो यो एजेण्डा कुनै काल्पनिक नभएकाले जनताले विश्वास गर्नेछन् । बाम तालमेलसँगै अहिले ६०–४० को कुरा पनि आएको छ । यसले झन् आशंका उत्पन्न भएको छ नि ? हामीले मेरो गुट, मेरो मान्छे, मेरो विचार भनेर जाने हो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्न । एमाले भित्र कम्युनिष्ट छन् । एमाले भित्र साम्यवादी र समाजवादी सोँच भएको व्यक्ति छन् । माओवादी र नयाँ शक्तिमा पनि त्यस्तै छ भन्ने सोच्नुपर्छ । त्यो भित्र मेरो गुट छ, व्यक्ति छ भनेर जाने हो भने हामी फेरि फुट, विभाजन बाहेक कतै पनि पुग्न सक्दैनौँ । यी कुरामा आम कार्यकर्ता र नेतृत्व तह पनि सचेत हुनुपर्छ । यो तालमेललाई दीर्घकालिन सोँच र योजनाकासाथ अघि बढाउनुको अर्को विकल्प छैन ।